သင့်ရဲ့ မော်တော်ယာဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်လိုက်ပါ - Shop
သင့်ရဲ့ မော်တော်ယာဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်လိုက်ပါ0456
အွန်လိုင်းစီးပွားရေးများဟာ အနာဂတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Locl Down အခြေအနေများကြောင့်လည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် Offline အခြေအနေမှ Online တွင်ရောင်းချခြင်းများသို့ အရှိန်မြင့်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူနှစ် ဦး စလုံးသည် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများ၏ အရေးပါမှုကို နားလည်သဘောပေါက်လာကြပြီး အကူးအပြောင်းလုပ်ရန်အတွက် စိတ်အားထက်သန်လာကြပါတယ်။
သင်သည် အွန်လိုင်းမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း၏ အောင်မြင်မှုကို တိုးတက်စေလိုသေ ာမော်တော်ကားရောင်းသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါက မဟာဗျူဟာများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ e-commerce စတိုးများတိုးလာခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ ရောင်းအားများ မြင့်တက်ခြင်းကိုလည်း အထောက်အကူပြုပေလိမ့်မည်။
မဟာဗျူဟာမှာ ဘာတွေပါဝင်သင့်သလဲ ဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ယနေ့လို အင်တာနက်ခေတ်ကြီးတွင် အွန်လိုင်းရှိနေခြင်းဟာ ထူးခြားမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ သင်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက် လူဦးရေအသစ်များတိုးပွားလာမို့ရန်အတွက် အွန်လိုင်းတွင် ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်လူငယ်များအတွက် အွန်လိုင်းတွင် ရှာဖွေမတွေ့နိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုံးဝမရှိပါ။
ဝဘ်ဆိုဒ်ရှိခြင်းသည် မလုံလောက်ပါ- သင့် Website ရဲ့ Interface ကို အသုံးပြုလွယ်ကူအောင် ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အလွယ်တကူ မှတ်မိစေနိုင်သော ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါစေ။ Website ၏ အပြင်အဆင်နှင့်ဒီဇိုင်းသည် ဝယ်ယူသူ Website ပေါ်တွင် အချိန်ကြာကြာရှိနေစေရန် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါတယ်။
သင်၏ SEO တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
အွန်လိုင်းရှာဖွေရေးနည်းပညာ (သို့) SEO များဟာ သင့်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှာဖွေရေး အဆင့်များကို တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်က Google တွင် “ cheap auto repair” ဟု ရှာဖွေသောအခါ ရှာဖွေမှုရလဒ်များ ပေါ်ထွက်လာပါမည်။ ထိုအခါ သင့်ရဲ့ Website များဟာ အပေါ်ဆုံးငါးခု(သို့) ထိပ်ဆုံးတွင် ထွက်ပေါ်နေစေချင်သလား? မရရှိခဲ့လျှင်တော့ SEO က ၎င်းကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် ကူညီပေးပါတယ်။
SEO ဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Google ပေါ်တွငိ ၇၀% ရှာဖွေသူတို့သည် ရှာဖွေပြီး ရလဒ်ပေါ်လာသော ပထမစာမျက်နှာကိုပင် နှိပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သင်တို့ရဲ့ Website ကို အမြင့်ဆုံးမှာရောက်လေ သင်တို့ရဲ့ Website သို့ နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်သူများပြားလေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Social Media အကောင့်များ ဖွင့်ပါ
Website တစ်ခုအပြင် သင့်ရဲ့ အွန်လိုင်းမော်တော်ယာဉ် ပုံသဏ္ဍာန်များအတွက် Social Media အကောင့်များလည်း ပြုလုပ်သင့်သည်။ ထိပ်တန်း Social Media များရဲ့ ထိပ်တန်းပလက်ဖောင်းသုံးခုဖြစ်တဲ့ Facebook, Instagram နှင့် Twitter အကောင့်များ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
၎င်း Social Media များသည် သင့်ရဲ့ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးကို အခမဲ့ ကြော်ငြာပေးပါသည်။ သင်ရဲ့ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးကို ငွေပေးချေပြီး လုပ်ဆောင်လျှင်လည်း သင့်ပစ္စည်းများရဲ့ အလိုအလျောက် ပို့စ်များ၊ သတ်မှတ်ထားသော Target များကိုသာ ပြသသော ပို့စ်များ အပြင် အခြားများစွာသော လုပ်ဆောင်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Social Media များသည် သင့်ရဲ့ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုကို အလွန့်အလွန်ပင် တိုးတက်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ E-commerce ကို တိုးတက်စေတဲ့ အပြင် သန်းပေါင်းများစွာသော ဖောက်သည်များကို လွှမ်းမိုးရန် အခွင့်အရေးပေးပါတယ်။
ချိန်းဆို/တွေ့ဆုံမှုများကို ကြိုတင် အချိန်ဇယားဆွဲပါ
ဝယ်ယူသူများ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူရန်လာသောအခါ ၎င်းတို့ကို နောက်ထပ်ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် ကြိုတင်ပေးထားပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က အဲယားကွန်းကို ပြင်ဆင်ရန် လာသောအခါ ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်ပြီး လာရောက်ယူဆောင်ရန် တိကျသေချာသော ရက်စွဲတစ်ခုကိုပေးပါ။ ဒါမှသာ သင်သည် အဲယားကွန်း၏ ပြသနာကို သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် တစ်ကြိမ်သာ လုပ်ဆောင်၍ မရသောအရာဖြစ်ကြောင်း ဝယ်ယူသူများအား သတိပေးပါ။ ၎င်းသည် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်သည် ဝယ်ယူသူများ၏ ကားကို အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွင် ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးပါ။
ဈေးဝယ်သူတွေကို အညွန်းရေးပေးဖို့ ဆွဲဆောင်ခြင်း
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဈေးဝယ်သူ အညွန်းတွေဟာ ဝယ်ယူအသစ်တွေ ရဖို့အတွက် အမြဲလိုလို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဈေးဝယ်သူများဟာ အမြဲလိုလို ဝယ်ယူဖို့ ဆိုင်တွေကို ကြည့်ရှုလေ့လာလေ့ရှိပြီး ဈေးဝယ်သူတို့ရဲ့ အညွန်းတွေဟာ ဝယ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် အထောက်အကူပြုမှာ သေချာပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်ဈေးဝယ်သူတွေကို ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံပြု သုံးသပ်ချက်၊ ညွန်းဆိုချက်တွေကို သင့်ရဲ့ website ကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှုကွန်ယက်တွေကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေးဖို့ တောင်းဆိုသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ဆီကို ဈေးဝယ်သူအသစ်တွေ ရောက်လာဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးတခု ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးကို Shop Seller Program မှ တဆင့် အွန်လိုင်းမှာ ချဲ့ထွင်လိုက်ပါ။
Shop Seller Program ဟာ သင့်ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နံပါတ်(၁) အကြီးမားဆုံးအွန်လိုင်းရှော့ပင်း ဈေးဝယ်ရာနေရာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတွေ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Shop မှာ သင်ရောင်းချနိုင်မယ့် သန်းပေါင်းများစွာသော ဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ထိတွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Shop မှာ ဘယ်လိုရောင်းချကြမလဲ?
Shop တွင် ရောင်းချသူတစ်ဦး ဖြစ်လာစေရန် Shop Seller Sign Up Page ကို သွားပြီး ရောင်းချသူတစ်ဦးဖြစ်လာစေရန် အလွယ်တကူပဲ စာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။
Shop Seller Program ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ သင့်စီးပွားရေးကို တိုးချဲ့ချင်တယ်၊ ပိုပြီး အောင်မြင်တဲ့ ရောင်းချသူတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် Shop Seller Program က သင့်အတွက် နေရာတစ်ခုပါပဲ။
Shop ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အပြည့်အဝ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေကြောင့် သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးဟာ အမြင့်ဆုံးကို ခဏအတွင်း ရောက်ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Shop အနေနဲ့ ရောင်းချသူ အသစ်တွေကို စောင့်ကြည့်ပေးခြင်းနဲ့အတူ အွန်လိုင်း ရောင်းချသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အောင်မြင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကြံညဏ်တွေကိုပါ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေဟာ Shop ရဲ့ ရောင်းချသူအဖြစ် သင်ရရှိနိုင်မယ့် စိတ်ကျေနပ်စရာ ဝန်ဆောင်မှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ တဝန်းက သန်းပေါင်းများစွာသော ဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ ထိတွေ့နိုင်မယ်။
Shop မှာ မှတ်ပုံတင်ပြီး ၂ရက်အတွင်း စတင်ရောင်းချနိုင်မယ်။
Shop ရဲ့ ရောင်းချသူတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အချက်အလက်များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်မယ်။
ပစ္စည်းတင်ရောင်းခ ပေးရန်မလိုပဲ သင်ရောင်းချရသလောက်ကိုသာ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့် အော်ဒါများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယုံကြည်ရတဲ့ မြန်ဆန်တဲ့ ပို့ဆောင်ရေးရှိပါတယ်
၂၄/၇ ကျွမ်းကျင်ဝန်ဆောင်မှုများ ရှိပါတယ်။
Shop မှာ ဒီနေ့ပဲ စတင်ရောင်းချလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးဟာ အရင်ကထက်ပြီး အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်
Previous ArticleMicrowave စက်တွေအကြောင်းသင်ဘယ်လောက်သိလဲဆိုတာ ဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်?Next ArticleImprove Your Automotive Business Online